ပို့စ်တင်ချိန် - 5/10/2014 10:24:00 PM
ယောက်ျားလေး ပီယဆေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ကောင်းကောင်း ရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ လူပျိုပေါက် အရွက်တုန်းက ပီယဆေးဆိုတာကို လိုချင်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့တော့..။ အတန်းထဲမှာ ပါဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ရည်စားထည်လဲတွဲနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရင် ပီယဆေး ရှိတယ်လို့ နာမည် ကြီးပြီ..။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ကလည်း မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ပီယဆေး ဘယ်ကရလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ဆိုပြီး အောက်ကျခံပြီး မေးရတော့တာပေါ့..။ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် ပီယဆေးကို ဖော်နည်း ၈ မျိုးလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်..။ နောက်ကျရင်တော့ အလျဉ်းသင့်သလို တင်ပေးသွားပါ့မယ်..။ အခုတစ်ခါကတော့ အလောင်းကောင်ကနေ ပီယဆေး ရယူရင်း သရဲနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်.။
၈ တန်းလောက်တုန်းက ကျောင်းကို ကျောင်းသားသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်..။ နာမည်က ကျော်ကျော်တဲ့..။ ရုပ်ရည် အပြောအဆိုကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ..။ ခက်တာက အခန်းထဲက မိန်းကလေးတွေ..။ တစ်ကျော်တည်း ကျော်နေတော့တာ..။ မုန့်စားဆင်းချိန် လည်း သူ့အတွက် မုန့်ဝယ်ပေးလာရတာနဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းပိုထည့် ပေးလာရတာနဲ့..ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က နည်းနည်းတော့ အမြင်ကပ်လာတော့ပေါ့နော်..။ အဲ့ဒါ တစ်ရက်လည်းကျရော.. သတင်းတစ်ခုက ထွက်လာတယ်.. “ကျော်ကျော့်မှာ ပီယဆေးရှိတယ်တဲ့..”
နောက်နေ့ မုန့်စားဆင်းတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အခြား သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မုန့်နဲ့ အချိုရည် ၀ယ် လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ကျော်ကျော့်စားပွဲကို သွားပြီး မုန့်နဲ့ အချိုရည်ကိုတင်လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ မျက်နှာကို အချိုဆုံးလုပ်ပြီး “သူငယ်ချင်းကျော်ကျော်.. စားပါအုံး… မင်းအတွက် ၀ယ်လာတာကွ..”
ဒီကောင်က ကျွန်တော်တို့ကို မယုံသလိုကြည့်တယ်..။ ပြီးတော့ သူ့အိပ်ကပ်ထဲကို သူပြန်ကြည့်တယ်..။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကနေ “ဒုတ်ခပဲ..။ ဒီဆေးက ယောက်ျားလေးတွေပါ အစွမ်းပြတာလားဟ…” ဆိုပြီး တိုးတိုးလေး ရေရွတ်သံကြားလိုက်ရတယ်..။
“ဟာ.. ဟရောင်.. တစ်မျိုး မထင်ပါနဲ့ကွာ.. ငါတို့က ရိုးရိုးသားသားကျွေးတာပါ.. တစ်ခုပဲ မင်းဆောင်ထားတဲ့ ပီယဆေးအကြောင်းသိချင်တယ်..။ မပြောပြရင်တော့ ငါတို့ အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ တိုင်ရလိမ့်မယ်…”
“တိုင်တော့ မတိုင်ပါနဲ့ကွာ..။ ပြောပြမယ်.. ။ ကတိတစ်ခုတော့ပေး.. မင်းတို့ သုံးယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့..”
“ဒီလိုကွ… ဒီပီယဆေးက လူသေကောင်ဆီက ယူထားရတာ.. စွမ်းတာ မစွမ်းတာတော့ မင်းတို့ အမြင်ပဲနော်..”
“အမငီးးးး. လူသေကောင်ဆီက…??? …ဘယ်လိုမျိုးလဲ ပြောပြပါလား..”
“အသက် ၄၀ ကျော်ပြီး လူပျိုစစ်စစ်ဆိုတဲ့ ဘယ်အလောင်းကမဆို ပီယဆေး ယူလို့ရတယ်..။ အဓိကက လူပျိုစစ်ရမယ်..။ အသက် ၄၀ကျော်မှ သေတဲ့အလောင်းဖြစ်ရမယ်..။ နောက်တစ်ချက်က အစိမ်းသေ မဖြစ်ရဘူး..။ ဆိုလိုတာက ရောဂါနဲ့ ဆုံးနဲ့သူဖြစ်ရမယ်..”
“မခက်ပါဘူး.၊ ၂လက်မအရှည်ရှိတဲ့ ဆံပင် အချောင်း ၃၀၊ ညာဘက် လက်မ လက်သည်းခွံ၊ ဘယ်ဘက် လက်သန်း လက်သည်းခွံ၊ ညာဘက် ခြေမ ခြေသည်းခွံ၊ ဘယ်ဘက် ခြေသန်း ခြေသည်းခွံ တွေက အိတ်သေးလေး တစ်အိတ်ထဲမှာ ရောထည့်ပြီး သွားလေရာမှာ ဆောင်သွား..။ ဒီမှာကြည့်..”
အဟုတ်ဗျာ..။ သူ့အိတ်ကပ်ထဲက ထုတ်လိုက်တာ ဆံပင်နဲ့ လက်သည်းခွံလေးတွေ ရောထည့်ထားတဲ့ အိတ်အကြည်လေးတစ်ခု..။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ကတော့ အပြုံးတွေ ကိုယ်စီနဲ့..။
ထုံးစံအတိုင်း သင်းချိုင်းက သုဘရာဇာဆီ အပူကပ်ရသည်။ စောင့်ရမည်။ သုံးသောင်း ပေးရမည်တဲ့…။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် တစ်ယောက် တစ်သောင်း ပေါင်းပြီး သုံးသောင်း ပေးထားလိုက်သည်။ ခက်တာက အလောင်းကောင် တစ်ကောင်ဆီကပဲဆိုတော့ ပီယဆေးက တစ်စုံပဲရမည်။ ကိစ္စမရှိ။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် တစ်ယောက် တစ်ပတ် အလှည့်ကျ ဆောင်ဖို့ တိုင်ပင်ထားကြသည်။
ကျွန်တော့်အထင် ၂ လ ၃ လ လောက်ကြာသွားသည်ထင်သည်။ သုဘရာဇာကြီးထံမှ အကြောင်း ကြားလာသည်။ ပီယဆေးရနိုင်မည့် အလောင်းတစ်လောင်း ဒီနေ့ရောက်လာမည်။ ညနေ လာယူရန် ပြောလာသည်။ ညနေ ကျောင်းဆင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ကျူရှင်လစ်ပြီး သင်းချိုင်းကုန်း ပြေးသည်။ ကျွန်တော့်တို့ရောက်တော့ သုဘရာဇာကြီးက အသင့်ဆောင့်နေလေပြီ..။
“ကဲ..ကဲ.. ယူစရာရှိတာ မြန်မြန်ယူ… သူများတွေ မြင်ရင် မကောင်းဘူး..”
“ဟာ.. ဦးလေး ယူပေးလေ..”
“ခွီး… ငါ့အလုပ်နဲ့ငါတောင် မအားဘူး..၊ ငါဟိုဘက်မှာ ရှိမယ်..။ ယူပြီးရင် ငါ့လာပြော.. ရော့ ဒီမှာ လက်သည်းညှပ်နဲ့ ကပ်ကြေး..”
အဲ့ဒါမှ ဒုတ်ခ..။ ကိုယ်ကလည်း ဒီအခြေအနေထိ ရောက်မှတော့ မတတ်နိုင်။ ဟိုနှစ်ကောင်ကြည့်ရတာ လည်း အားကိုးလို့ရမည့်ပုံမပေါ်..။ အလောင်းကောင်ကို ကျွန်တော် ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ အလောင်းကောင်ပေါ် နားနေသော ယင်ကောင် တစ်သိုက် ထပျံသွားပြီး ဆုံးရွားလှသော အပုပ်နံ့က နားခေါင်းထဲ အလုအယက် တိုးဝင်လာသည်။ အလောင်းကောင်က မျက်နှာ တစ်ခုလုံးဖူးယောင်နေပြီး နာခေါင်း၊ နားရွက်၊ မျက်စိ၊ ပါးစပ် စတာတွေက သွေးပုပ်တွေ ကျလျက်ရှိသည်။ သြော်… ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်သေတဲ့ သူဆိုတော့လည်း လူကသေသွားပေမယ့် သွေးတွေက တောက်လျှောက် ကျဆင်းနေတာ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော် အသက်အောင့် ကပ်ကြေးယူပြီး အလောင်းကောင် ဦးခေါင်းက ဆံပင် အနည်းငယ်ကို ညှပ်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေကို လိုက်ညှပ်သည်။ အလောင်းကောင်က အသက် ၅၀ လောက်ရှိမည်ထင်သည်။ ပိုက်ဆံရှိ လူလတ်တန်းစားထဲက ဖြစ်နိုင်သည်။ လိုချင်တာတွေ ယူပြီးသည်နှင့် သုဘရာဇာကြီးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်ခဲ့တော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ သင်းချိုင်းမှ ပြန်ထွက်လာချိန်သည် ညနေ ၆း၃၀ ခန့်ရှိလေပြီ။
ပီယဆေးကို ကျွန်တော်အရင်ဆုံး ဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အထုပ်ကို ကျွန်တော့်အိမ်ကို ယူလာလိုက် သည်။ အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ဘေးအိမ်က ကောင်မလေး ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြုံးပြတာ မြင်လိုက်သည်။ နဂိုဆိုရင် အကြောမတဲ့သော ဒီတစ်ယောက် ဘာစိတ်ကူးတွေ ပေါက်ပြီး လာပြုံးနေသည်မသိ။ ပီယဆေးကြောင့် ပြုံးပြတာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ပြီး ပီယဆေးကို ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်ပြီး အခန်းထဲ ချိတ်ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ရေမိုးချိုး၊ ထမင်းစား၊ တီဗွီကြည့်ပြီး ည ၁၀း၀၀ နာရီလောက်မှာ အိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။ အဲ့ဒီအထိ အဆင်ချောသေးသည်။
ည ၁း၀၀ နာရီလောက် လုံးဝ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေသည့်အချိန်။ ကုတင် အောက်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ငိုနေသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ အသံက အမျိုးသားတစ်ဦးအသံ။ ငိုတာမှ တအားကို ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေတဲ့အသံ။ ကျွန်တော် အံ့သြစွာပဲ ဆက်လက်နားဆွင့်နေလိုက်သည်။ သေချာသည်။ ဒီငိုသံသည် အိမ်မှ လူတွေထဲကတော့မဟုတ်။ ကျွန်တော် ဇောချွေး ပြန်လေပြီ။ မဟုတ်က ဟုတ်က လုပ်ထားတာတွေကြောင့်လား…။
“ကျွန်တော့်ကို လွတ်ပေးပါဗျာ… ကျွန်တော့်ကို မချုပ်ထားပါနဲ့…။ ကျွန်တော် သွားပါရစေ…”
ငိုသံတွေကြားမှ စကားသံတွေ ကျွန်တော်ကြားနေရသည်။
“ကျွန်တော့်မှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာ..။ ကျွန်တော်သွားပါရစေ..။ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော့် အုတ်ဂူခြေရင်းမှာ ပြန်မြှပ်ပေးပါ..။ ကျွန်တော့်ကို သွားခွင့်ပေးပါဗျာ….အီး..ဟီး..ဟီး…”
သေချာပြီ..။ ညနေက အလောင်းကောင် ကျွန်တော့်ဆီ သူ့ပစ္စည်းတွေ ပြန်တောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် စိတ်စွဲပြီး အိပ်မက်မက်တာလားဆိုတာ သေချာအောင် အမှတ်စဉ်ရေကြည့်သည်။ ကိုယ့်အသားကိုယ် ဆွဲစိတ်ကြည့်သည်။ အိပ်မက်မက်နေတာမဟုတ်။ ငိုသံက ပိုမိုကျယ်လောင်လာသလို… သူ့အသံတွေထဲမှာ ဒေါသသံတွေ ပါလာသည်ဟုလည်း ကျွန်တော် ထင်မိသည်။ အိမ်ကလူတွေကတော့ တစ်ယောက်မှ သိပုံမပေါ်..။
ကျွန်တော်လည်း အရဲစွန့်ပြီး…”ကျွန်တော် မနက်ဖြန် ညနေ ပြန်ထားပေးပါ့မယ်..။ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ..” လို့ ပြောပြီး နားပိတ်ပြီး ရသမျှ ဘုရားစာတွေ ရွတ်ဆိုနေလိုက်တယ်..။ ကျွန်တော် ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားလဲဆိုတာတောင် မသိလိုက်ပါဘူး..။
နောက်နေ့ ဟိုကောင်တွေကို ပြောပြီး ညနေကျောင်းဆင်းတာနဲ့ သူ့အုတ်ဂူခြေရင်းမှာ သူ့ပစ္စည်းတွေကို ပြန်မြှပ်ပေးလိုက်တယ်..။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘာပြသနာမှ မရှိတော့ပါဘူး.. ဒီနည်းလမ်းက တစ်ကယ်စွမ်းလား မစွမ်းလာတော့ မသေချာပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် သေချာပါတယ်..။ ဆံပင်နဲ့ ခြေသည်း၊ လက်သည်းတွေဆိုတာ ၀ိဥာဉ်ချုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါပဲ..။ ကျော်ကျော်ကတော့ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် ၀ိဥာဉ်တစ်ကောင်ကို အဲ့လိုချုပ်ထားနေတာလား..၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် ကျမှပဲ ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံတာလားဆိုတာကတော့ မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ပီယဆေးဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ပြီး ဝေးဝေးကနေသာ ရှောင်ခဲ့တော့ပါကြောင်းးး..
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> ghost
အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ ၀က်ကိုတောင် tatoo ထိုးပေးရတယ်လို့
ကလေးကို သတ်ပြီး ဟင်းချက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ လင်မယား
ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ သူတွေမှာတွေ့ ရတတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာ...
ယူနိုက်တက် လူငယ်ကစားသမားလေးကို ပြိုင်ဘက်ကလပ်များ အ...
ဆုံးရူံးမူတွေကိုပြန်လည် အစားထိုးနိင်တဲ့ စက်ရုပ်လက်
မန္တလေးတွင် ဆက်သွယ်ရေးစခန်း ၁၀၀ ကျော်နှင့် တာဝါတိုင...
ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းကြောင့် ချစ်သူနှင့် ပြဿနာတက်ဖွယ် ...
သားစိုး နဲ့ နန်းဆုရတီစိုး တို့ ကမ္ဘာ့ဖလား၂ဝ၁၄ကို ဘာ...
ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း မရှိဟ...
ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှ MPT မိုဘိုင်း...
ပရိသတ်တွေရဲ့ မျက်ကြည်လွှာတွေ ကိုယ်စားလှူပေးခဲ့တဲ့ ထ...
မွန်ဘိုင်းမှာ လမ်းဘေးသေးပေါက်တဲ့လူတွေကို ရေပိုက်နဲ...
ရွန်နီနှင့်ဂျုံးစ်တို့ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် အဆင်သင့်ဟု ဂ...
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ထိတွေ့ပြီး ဝယ်ယူရတ...
အပစ်ရပ်ထားတဲ့ RCSS/SSA ရုံးကို အစိုးရတပ် ရှောင်တခင...
တညင်းကုန်းဘူတာဈေး၌ ကုန်ထမ်းသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများ...
အမေက Facebook အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းခိုင်းတဲ့အတွက် ၁...
အာဖရိကတိုက်ကို ကူညီထောက်ပံ့ငွေ ၁၂ ဘီလီယံပေးမည်ဟု တ...
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း မန်နေဂျာဦးဇော်မြင်...
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ...
မျိုးစောင့်ဥပဒေကန့်ကွက်သူများကို ရှုတ်ချဟု အမျိုးဘာ...
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခြင်း (အမေးအဖြေ) (၃)
စည်းကမ်း မလိုက်နာသည့် ယာဉ်မောင်းများကို လိုင်စင် ရ...
တောင်ဆူဒန်မှာ အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီမှုရ
၂၀၁၁ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု
ကေအိုင်အေ ဖမ်းထား သူတွေ ပြန်လွှတ်ရေး PCG ကြားဝင်
မင်္ဂလာဆောင်မှာ ၀မ်းကွဲအကို သတ်လို့ သေဆုံးသွားတဲ့ သတ...
RCSS/SSA နဲ့ ဆက်သွယ်သူ မတရားသင်းပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲခံရ
တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးသွားသော SNLD ကျိုင်းတုံတာဝန်ခံကို...
အမရပူရမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့ သောက်သုံးရေ အခက်ကြုံ
ရဲကားဖြတ်အသွား ဆေးခြောက်ရောင်းချသူသည် ဥပဒေကိုမထီမဲ...
မအူပင်တွင် ၉၉ရာခိုင်နှုန်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရန် ဆန္ဒပြု
ရွှေတိဂုံပုံတူကိတ်မုန့်လှီးခဲ့သည့် မြန်မာသံအမတ်ကို ...
ဗိုလ်ဗထူးတန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာစီမံကိန်းမှ တိုက်ခန်းဝယ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ မအ...
အရေပြားကင်ဆာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိင်တဲ့ App
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ ရောက်ခိုက် ဘူးသီးတောင်နှင့် ...
ဗောဓိညောင်ပင်အား ကဆုန်လပြည့်နေ့ မြေချ စိုက်ပျိုးမည်
နေပြည်တော်၌ ယနေ့စတင်မည့် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွ...
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကို သစ်ပင်စိုက်၍ပြန်ကုစားရန် ရန်...
တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်စစ်ဘေးရှောင် ...
တန်ကြေး ဒေါ်လာ ၈သိန်း၁ထောင် ရချိန်မှာ လေလံပွဲကို ရု...
ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ သံတမန်အဖြစ် နန်းခင်ဇေယျာနှင့် စော...
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ရေနှင့် သန့်ရှင်းမှုအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ...
ဆုပန်ထွာရဲ့ စေ့စပ်ပွဲ ကန့်ကွက်ခြင်း နောက်ဆက်တွဲြေ...
လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြ...
တောင်ဆူဒန် သမ္မတ သူပုန်ခေါင်းဆောင်နဲ့ တွေ့မယ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကန့်သတ်မယ် ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ...
အသည်းကွဲတဲ့အခါ ကောင်းတဲ့ဘက်က ခုလို ပြန်တွေးကြည့်ပါ
Beats Electronics ကို ၃.၂ ဘီလီယံဒေါ်လာ ဖြင့် ၀ယ်ယူဖ...